Indlu yeeNdwendwe kunye negadi iValtellina CIR:014040-CNI-00005
Indlu yethu yeendwendwe imi eMazzo, ekuqaleni kweMortirolo Pass, kwaye ikufuphi kakhulu nesikhululo sikaloliwe saseTirano (Rhätische Bahn / Bernina Express) kunye nezikhululo zokutyibiliza kunye nezikhululo ezishushu zaseBormio, eLivigno, eSt. Moritz.
Ngokungena okwahlukileyo, unokonwabela ukuzimela ngokupheleleyo ngexesha lokuhlala kwakho. Ngalinye amagumbi amathathu ahonjiswe ngencasa kunye nenkathalo, ukuxuba ifanitshala yemveli kunye neyanamhlanje.
Sinebalcony entle yabucala kunye negadi.
* Inkonzo yokudlulisa yasimahla ukusuka/ ukuya kwisikhululo sikaloliwe saseTirano.
Indlu yeendwendwe zosapho lwethu yodwa ngokwenene; yakhiwa ngo-1920 ngutatomkhulu wethu eMazzo, echazwa njengenye yezona lali zintle zaseItali.
Sihlaziywe ngokupheleleyo, siye sahombisa ngefanitshala entle eyenziwe ngutatomkhulu wethu njengomchweli wemithi.
Indlu kunye nelali yethu izele yimbali kunye nezithethe esinokukuvuyela ukwabelana nawe ngazo; sinentliziyo yokugcina ibali leengcambu kunye nezinyanya zethu, kwaye sixhalabele ngokukodwa ukugcinwa kwendawo yethu.
Ukhenketho lwasimahla lwabakhenkethi kunye ne-Il Trenino Rosso del Bernina
IMazzo di Valtellina yilali ezele yimbali, enezakhiwo ezibuyela emva kwinkulungwane ye-16. Indlu yethu yosapho ikwintliziyo yeMazzo kwaye, kwibalcony yakho yabucala, uya kuba nakho ukonwabela umbono omnandi wecawe yethu kunye neentaba ezinomtsalane.
Kumgama omfutshane wokuhamba, ungaqala uhambo oluhle emahlathini nasezintabeni zethu, thatha ibhayisekile yakho kwaye unyuke iMortirolo Pass, apho iGiro d'Italia imisa rhoqo, thatha indlela kwaye ujonge iSwitzerland, iLake of Como kwingingqi, okanye Ukutyibiliza kwisikhululo esidumileyo saseBormio ebesibambe uKhuphiswano lweHlabathi lweSki kwiminyaka yakutshanje.
Ngelixa sijonge ukuhlonipha ubumfihlo beendwendwe zethu, sihlala sifumaneka kubo; ngenxa yamava ethu olawulo lwehotele ixesha elide, sinokwabelana kwaye sinike iingcebiso ngeendawo zokundwendwela okanye ukutya okuqhelekileyo okunokonwaba.
Ngaphaya koko, ukuba kukho naziphi na iingxaki zobugcisa, sihlala sikhona ukunceda abathengi bethu.
Ngelixa sijonge ukuhlonipha ubumfihlo beendwendwe zethu, sihlala sifumaneka kubo; ngenxa yamava ethu olawulo lwehotele ixesha elide, sinokwabelana kwaye sinike iingcebiso ngeendawo…